यो चासो बस अनलाइन शूटर खेल वा विधा मोबा लागि साइन गरेका अप सबै प्रयोगकर्तालाई "बाइट", के मतलब को प्रश्न। यो विधि अन्य खेलाडीहरूको विरुद्धमा युद्ध मा धेरै लोकप्रिय रणनीति को एक डिजाइन गरिएको छ। यसको उद्देश्य अर्को युद्धमा अवस्था फाइदा लागि पासो सिर्जना छ।
कठबोली को उपस्थिति
को अंग्रेजी भाषा को शब्दकोशमा यसलाई "बाइट" के मतलब सिक्न गर्न लागू गर्नै पर्छ। यो शाब्दिक रूपमा अनुवाद जो चारा को शब्द छ "चारा।" अनुवाद र baytinga रणनीति को सार बताए।
टोलीमा देखि एक व्यक्ति अरूलाई शत्रु पर्खिरहेका बेला चारा को भूमिका को लागि चयन गरियो। जब सबै शत्रुलाई सही ठाउँमा हुनेछ, तिनीहरूले राम्रो स्थितिमा रहेको चारै ओर र मार्न सजिलो हुनेछ। सामान्यतया, विरोधीहरूले शायद, पासो तयार कि युद्धको उत्तेजना साधारण अर्थमा भन्दा प्रबल किनभने बुझ्छु। यसरी ambushes अधिकांश खेल कुनै पनि सफल छन्।
छैन कम प्राय baytingom रणनीति, एक प्रयोगकर्ता पनि जाल को जानबूझकर सिर्जना बिना मित्र गर्न शत्रुहरू ल्याउँछ जब भनिन्छ।
मानक योजना र प्रशिक्षण
यसलाई "बाइट" के मतलब छ, र एक रणनीति रूपमा प्रयोग गरिन्छ अन्वेषण गर्न आदर्श, तपाईं मात्र गर्न सक्छन् अभ्यास। चारा को भूमिका मा सधैं पहिलो नजर मा दुई वा तीन शत्रुहरू लागि सजिलो pickings छ जो सबै भन्दा नाजुक लडाकु छ। को ठहराव हुन सहमत भएको छ जसले खेलाडी, आक्रमण लागि तयार र बर्बाद गर्न वा युद्धमा एक वर्ग सहूलियत बिन्दु तरिका गणना हुनुपर्छ।
पनि जाल को एक सफल समापन संग, यो सबै भन्दा कम स्वास्थ्य छ रूपमा, शत्रुको को मुख्य लक्ष्य रहने र यो नक्शा को साँघुरो खण्डमा वरिपरि बारी गर्न कठिन हुनेछ। विरोधीहरूले एक निश्चित स्थिति पुग्न गर्दा, मित्र लुकाउने बाहिर popping र आश्चर्य को क्षण रमाइलो छन्। एक सेकेन्डमा hitch हत्या बराबर छ। को चाल पूर्ण काम गर्दछ र सबै भन्दा नेटवर्क रन मा प्रयोग गरिन्छ किनभने यो छ।
जो "बाइट" मतलब, राम्रो तरिकाले सिक्न र व्यवहार मा यो कसरी लागू गर्न, तपाईं ambushes भाग र शत्रु गरेको चाल पकड हुनुपर्छ। मुख्य कुरा हो - कि एउटै ठाउँमा एक खेल जाल शायद प्राप्त दुई पटक सम्झना र तयार विरोधीहरूले मा आक्रमण समातिएको गर्न सकिन्छ।
खेल दुई भागमा Bayting, "DOTA"
अनलाइन खेल विधा मोबा, अधिक दस वर्ष को लागि "DOTA" भनिन्छ प्रयोगकर्ताहरूको लाखौं लोकप्रिय छ। नयाँ खेलाडीहरू सधैं चाँडै प्ले र नेटवर्क लडाई को प्रबेश र बहिष्कार सिक्न सिक्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। सबै को पहिलो, तिनीहरूले जो "pillbox" मा "बाइट" अर्थ, र यो कसरी आफूलाई गर्न, रुचि राख्नुहुन्छ।
पूरा गर्न जाल टोली सदस्य बीच राम्रो संचार, साथै खेलको समझ हुनुपर्छ। यो बिना प्लेयर बस ढिलो र निरर्थक हुनेछ वा प्रारम्भिक क्षेत्रमा देखा र लुकेर आक्रमण बर्बाद हुनेछ। खेल "DOTA" सबै जाल लागि स्थानहरू अध्ययन गरिएको हुनाले, यो शत्रु एक झटका स्वीकार गर्न तयार हुन सक्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ। तैपनि, उद्देश्य रूपमा सधैं तीर वा स्वास्थ्य एउटा सानो स्तर संग एक जादूगर मात्र चयन गरिएको छ। आफ्नै चरित्र आक्रमण रक्षा गर्ने क्षमता मा सावधानीपूर्वक गरिनेछ, र पासोमा कुनै प्रभाव छ।
यो रणनीति परिवर्तन र खेलको दोस्रो भाग मा छ। मस्यौदा अद्यावधिक नक्सामा, खरिदका लागि केही मेकानिक्स र वस्तुहरू परिवर्तन, तर सार एउटै रहनेछ। एक खेलाडी यो "Dota 2" मा "बाइट" के मतलब जान्न चाहनुहुन्छ भने, यो अघिल्लो भाग बाट ज्ञान लागू गर्न पर्याप्त छ।
Bayting अनलाइन शूटर
पूर्णतया यो मा "बाइट" के मतलब बुझ्न "सीएस: जाओ" खेल नै को सार जान्नु आवश्यक छ। विशेष सेना वा आतंककारीहरूले छेउमा एक विशेष स्थान मा झगडा पहिलो व्यक्ति संग प्रयोगकर्ताहरू। एक छेउमा सामान्यतया पाँच र दस मान्छे बीच लडे छ। राउन्ड मा जीत एक बम exploding वा निर्मूल द्वारा सबै शत्रुहरू मारे कि टोली छ।
यस्तो अवस्थामा खेलाडीहरू यो कार्ड आफ्नै विशेष छ किनभने, गुणवत्ता लुकेर आक्रमण सिर्जना गर्न गाह्रो छ। किनभने यो दूरी मा मार्न सजिलो छ दूरी, एक ठूलो भूमिका खेल्छ, र लुकेर आक्रमण तत्काल असफल। यो केवल शत्रु आँखा देखा र तिनीहरूले मित्र को लागि प्रतीक्षा कहाँ चुनिएको ठाँउ, तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्नु पर्दैन।
चाँडै पासोमा बन्द र इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न, तपाईं, लडाई मा व्यापक अनुभव हुनुपर्छ सही लक्ष्य र नक्सामा स्थिति चयन गर्नुहोस्। टोलीमा देखि खेलाडीहरू यस्तो ambushes मा भाग छ भने, संगठन संग कठिनाइ उत्पन्न हुँदैन। को ठहराव आफ्ना शत्रुलाई राम्ररी भेट्नुपर्छ प्रयास गर्नेछ किनभने, एक sniper चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ रूपमा।
यो एक ठूलो पालो गर्न कहाँ जाँदै छ "एक सय एक, गर्न"
GTA San Andreas राम्रो ग्राफिक्स - विकल्प र अनुकूलन
"Maynkraft" एक गाजर आहारा गर्न कसरी विवरण
एक सौंदर्य उपाय खेलाडी कौशल रूपमा wot मा ट्रंक मा ताराहरु
युरोप को राज्य। युरोपेली देशहरूको क्षेत्र के हो?
लोक उपचार को dysbiosis उपचार
छर्रहरुमा हटाउन मिसिन - एक अपरिहार्य साधन
कागज बनेको एउटा iPhone कसरी बनाउने? योजना, निर्देशन
ग्याजेट "Digma" कम्पनी - ट्याब्लेट (ग्राहक समीक्षा र विनिर्देशों)
तपाईं बैंकहरुलाई ऋण तिर्न छैन भने के हुन्छ, र कि यो स्थिति बाहिर एक तरिका छ?
इतिहास "माज्दा RH7" कार
एक हर्निया SHmorlja के हो र यो खतरनाक छ कसरी